बेटी बचाऊ बेटी पढाउ अभियानको सदुपयोग या दुरुपयोग ? -
देशमा राजतन्त्र हुँदा सरकारी विद्यालयमा पढाइने किताबमा राजा-रानीको फोटो हुन्थ्यो।
२०६५, जेठ १५ मा राजतन्त्र ढल्यो, देशमा गणतन्त्र आयो। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति आए।
परिवर्तन यतिमै रोकिएन। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी देशमा तीन तहका सरकार छन्।
वडा नम्बर ८ को बिलाग्रा मा.वि.का छ सय जना विद्यार्थीलाई मेयर यादवको माला लगाएको फोटो भएको झोला वितरण गरिएको हो। विद्यार्थीलाई बाँडेको झोलामा ‘शिक्षा नै समृद्धिको विकास हो’ लेखिएको छ। झोलामा लोगोसहित सेवा तथा मित्रता केन्द्र नेपालको नाम पनि छ।
नगरपालिकाले झोला बाँड्न ९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। यसबारे मेयर यादवसँग कुराकानी गर्दा यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘एउटा संस्थालाई झोला बनाउन दिएको, मेरो फोटो राखेर प्रिन्ट गरिदिएछन्। फोटो छापिइसकेपछि झोला देखेको हुँ,’ मेयर यादवले अनलाईन न्युज पाटीसँग भने, ‘त्यसरी मेयरको फोटो राख्न नहुने हो। किन राखिदिए थाहा भएन। दस प्रतिशत रकम त्यो संस्थाले पनि सहयोग गरेको थियो।’
जनप्रतिनिधि चर्चा बटुल्न नभई काम गर्न नगरपालिकामा पुगे बताउँदै उनले आफ्नो वचाउ पनि गरे।
‘हामीले त फोटो अरूलाई देखाउने होइन नि! जनताका लागि काम गर्ने हो,’ उनले भने।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको आगमनमा संख्या बढोत्तरी